richardphyo - MYSTERY ZILLION
မူလ › richardphyo › မှတ်ချက်များ ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ယခု ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသလား? ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းလိုပါလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button များမှတဆင့် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်သကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အနေဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်ခြင်း MYSTERY ZILLION တွင် English သို့မဟုတ် Unicode ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဇော်ဂျီ ၊ ဧရာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိ။ Unicode fonts များမှာ Mon3,Yunghkio, Myanamr3 စသည်များ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Unicode Guide ကို ဒီမှာ Download ချပါ။ Zawgyi to Unicode ConverterDon't share ebook or software if nobody request. You can find free book websites on here. We are welcome for discussion or asking question instead.
richardphyo · အချက်အလက်
I've got invitation from bro Han Myo Htwe. Thanksalot bro!! :)
Comment by richardphyo
please invite me richardphyo1[at]gmail[dot]com. Thanksalot..
in Jailbreak your ipad 2
Tango video calls ဆိုတဲ့ app ကို appstore ကနေဒေါင်းပြီး face to face စကားပြောလို ့ရပါတယ်။ 3GS နဲ ့လည်းပြောလို ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 3GS နဲ ့ဆို မှန်လေးတစ်ချပ်တော့ဆောင်ထားဖို ့လိုလိမ့်မယ်။ 3GS မှာ front camera မပါလို ့ပါ။ :tongue:
in FaceTime စမ်းချင်လို့ပါ
Zawgyi Keyboard for iPad 4.2 ကိုဖြုတ်ရမလားဆိုတာတော့ ဖြေရမှာမသေချာဘူး။ Zawgyi font ကိုပါ remove လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ ဘာစာလုံးမှပေါ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ Zawgyi Keyboard ကိုပဲ ဖြုတ်လို ့ရတယ်ဆိုရင် ဖြုတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဖြုတ်လို ့မရရင် overwrite …
Zawgyi Keyboard iOS 4.1 ကိုသွင်းရမှာပါ။ iOS 4.2.1 မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး install လုပ်ကြည့်ပါ။ သွင်းပြီးသားကို remove မလုပ်ပါနဲ ့။ တစ်ခါတုန်းက zawgyi font ကို remove လုပ်လိုက်တာ ဖုန်းထဲမှာဘာစာမှ မပေါ်တော့ဘူး။ မရရင်တော့ ပြန်ပြီး ဖုန်းကို restore ပ…
You can use greenpoision jailbreak tool for 4.2.1. I've already jailbroke my iPhone with iOS 4.2.1. It's worked. You can check it out this tutorial video. in ipad 64gb version 4.2.1(8C148) Jailbreak လုပ်ချင်လို​့​ပါ..
Everything is working on iPhone 3GS with iOS 4.0.1. Same like normal after jailbroken. Very cool. Now I can read Myanmar font on my phone.
in JailbreakMe: iPhone4Jailbreak Released by Comex
I can use on my mac book. I can read myanmar letters.But I don't know how to type myanmar font.If you know how to switch english to myanmar typing pls share me.Thanksalot.
in Zawgyi Keyboard For Mac
now you can invite [email][email protected][/email] form your gtalk.good luck:D
in G talk မှ English to Myanmar dictionary
First of all thanks for gave me suggestion about install windows 7.Now I've already installed windows7ultimate 32 bitsOEM version in my laptop.That one is pirate.I bought it from Malaysia.No need to use any activate softwar…
in windwos7တင်ချင်လို ့ပါ
အခုလို၀ုိင်း၀န်းရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ post က member ၀င်ပြီးကတည်းကစုစုပေါင်း၂ခါလားပဲတင်ရသေးတယ်။ အဲဒါဘယ်မှာတင်ရမလဲဆိုတာလိုက်ရှာရင်းတွေ ့တဲ့နေရာကနေပြီးတင်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်က MZ မှာ post တွေကိုပဲလိုက်…
တကယ့်ကိုအသုံး၀င်သော software လေးပါ။ key တွေအကုန်လုံးက free ပေးပါတယ်။ username and password ကို copy and paste လုပ်ပြီး update လုပ်ရုံပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အဆင်အရမ်းပြေနေပါတယ်။ဒါပေမယ့်အခု Microsoft Security Essentials ကိုသုံးနေပါတယ်။သူက freeware ပါ။ကိုယ…
in ESET Keys Finder V6.5
ကျွန်တော်အခု Singapore မှာပါ။
ကျွန်တော့်ဖုန်းက LG cookie(KP500) အမျိုးအစားပါ။V.1 တုန်းကသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။အခု version က install လုပ်တာဘာပြသနာမှမပေါ်ပေမယ့် dictionary ကိုဖွင့်ပြီးတစ်ခုခုကိုရှာလိုက်ရင် application က restart ကျကျသွားတယ်။ဖုန်းကဘာမှမဖြစ်ဘူး။
in Ornagai Mobile Version2- RC2
I can installed in my LG KP500 (Cookie). Appearance is ame like nokia 5800.Thank you very much.:67::67::67::67:
in Eng to Myanmar dictionary in phone
Thanks you for your information.I haven't visit to MZ for long time.I visited back today.:6::6:
in အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဘာသာပြန်ဆော့ဖ်၀ဲ
:6::6::6:Nice to meet you.:6::6::6:
in အားလုံးအားလုံးအတွက် အိုင်းစတိုင်း လာပ&#4
ကျွန်တော် gpass ကိုသုံးတာ အမြဲတမ်း off line ပဲပြနေတယ်။ပြန်ပိတ်ပြီး ဖွင့်တာလည်းမရဘူး။
in GPass (ကောင်းမှကောင်း...ရှယ်ပဲ)
Yes! I am absolutely Burmese. Nice to meet you too!
Thank you for your help guys!I'm really appreciate all of your advices.